Air Madagascar : Kaompania roa no voatana -
AccueilSongandinaAir Madagascar : Kaompania roa no voatana
Air Madagascar : Kaompania roa no voatana
13/03/2017 admintriatra Songandina 0
Nihintsana an-dalana. Araka ny efa fantatra, kaompaniam-pitaterana an’habakabaka vahiny telo, Air Mauritius sy Air Austral ary Ethiopian Airlines, no kandidà amin’ny fiaraha-miasa amin’ny kaompania Air Madagascar.
Taty aoriana, nihena ho roa izany rehefa nihintsana an-daharana ny Air Mauritius. Araka izany, ny Air Austral sy ny Ethiopian Airlines sisa no hiady lohany amin’izay hiara-hiasa amin’ny Air Madagascar sy ny fanjakana malagasy. Ireo kaompania vahiny roa ireo izany no nahafeno ny fepetra rehetra notakiana amin’ny fiaraha-miasa amin’ny fisokafan’ny renivolan’ny kaompania Air Madagascar. Voalaza fa efa mandeha ny fifandresen-dahatra amin’izao fotoana izao ary hisy fanasana ny “adjudicataire definitif” amin’ny fanaovan-tsoniam-pifanarahana amin’ny fanjakana malagasy amin’ny fanarenana sy fampivoarana ary fampandrosoana ny Air Madagascar any amin’ny faha-31-n’ny volana Marsa any.
Marihina mantsy fa ny fanjakana malagasy no manana petra-bola betsaka indrindra amin’ity kaompaniam-pitaterana an’habakabaka Air Madagascar ity.
Ankoatra izay, nanambara ny orinasa Air Madagascar fa miankina tanteraka amin’ny fombafomba sy ny fitsipiky ny fanjakana malagasy, izay manana petra-bola betsaka amin’ny orinasa, ny sivana amin’ireo kaompania roa kandidà nahafeno fepetra ireo.
Ankoatra izay, efa eo am-pelatanan’ny tale jeneraly vaovao, Hery Nirina Rakotomalala, ny ho avin’ny Air Madagascar. Efa miroso amin’ny fametrahana ny politika-pampandrosoana sy fanarenana ny orinasa izy sy ireo mpiara-miasa aminy.
Lalatiana Free FM : Vorondolo, Voromanga…
Mitafy henatra tanteraka ny tontolo politika manoloana ireny fanambarana maro samihafa ireny, indrindra ny fanambarana farany nataon’i Lalatiana Rakotondrazafy avy amin’ny antoko Freedom… Taona 2012 Nanambara i Lalatiana Rakotondrazafy fa manohana an’i Andry Rajoelina amin’ity ...Tohiny
Fitsaram-bahoaka : Tarazon’ny 2002 sy 2009
Ratsiraka, Zafy ary Ravalomanana:NIHITSOKA TANY JOHANNESBURG
Ratsiraka, Ravalomanana ary Rajoelina:OLONA HIFAMALY FATY FOTSINY !